'साझाजबले जागिर खाने र खुवाउने दुवै पक्षलाई जोडिरहेको छ'
काठमाडौं, १७ भदौ । पोखरा-१५ नयाँ गाउँका २८ वर्षीय युवा रमेश दाहाल यतिबेला रोजगारीका लागि पुलको भूमिकामा छन् । लामो समयदेखि स्वरोजगारी, रोजगारी तथा व्यावसयिक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको जिनियस सर्भिस नेपालका दाहाल अब जागिर र कामदार दुवै खोजिदिने रोजगारी सेवा लिएर आएका हुन् । पुतलीसडकमा कार्यालय रहेको साझाजब डट कम नामको पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएका दाहालका अनुसार साझाजबले जागिर खोज्ने व्यक्ति र जागिर दिने संस्थाहरुलाई जोडिदिने काम गर्छ । उनीहरु दुवै पक्षले नयाँ जागिरको अफर दिन र लिन सक्नेछन् । प्रस्तुत छ, साझापोस्टले उनै युवा दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
साझाजबको सोच कसरी आयो ?
हाम्रो वरिपरि अवसरहरु छ्यापछ्याप्ती छन् । आसपास अवसरै अवसर हुँदा पनि कस्तुरीले आफ्नो नाभीको महत्व नबुझेजस्तै हामी भौंतारिइरहेका हुन्छौं । व्यवसाय गरिरहेका साथीहरुलाई स्टाफ खोज्ने चटारो छ भने युवायुवतीलाई जागिर नभेटेर समस्या छ । हामीलाई लाग्यो, यी दुई पक्षलाई जोड्न सकियो भने एउटा नयाँ उद्यम चलाउन सकिन्छ जसले अवसर सिर्जना गर्छ, अवसरहरु पत्ता लगाउन सक्छ । यही सोचलाई सार्थकता दिन साझाजब सुरु गरिएको हो ।
विशेषत तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी जागिर दिने र जागिर खोज्ने दुवै पक्षलाई जोड्छौं र उहाँहरुको आवश्यकता आपसी समझदारीमा पूरा गरिदिन्छौं । साझाजबमा आएर जागिर दिने संस्थाले अकाउण्ट खोली आफ्नो जब पोस्ट गर्न सक्छन् । उक्त जब जागिर खोज्ने व्यक्तिहरुले आवेदन दिएपछि संस्थाले छान्ने वा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाई जागिरमा राख्न सक्नेछ । त्यस्तै विभिन्न संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायको पुरा विवरण यस पोर्टलमा राख्न सक्नेछन् । संस्थाको आफ्नै वेबसाईट जस्तै पेज तयार हुनेछ । त्यहाँ संस्थाले आफ्नो अन्य अफिसियल सुचनाहरु, अफिसको सेवा सुविधाहरु, अफिस ग्यालरीहरु व्यवस्थापन गर्न पनि पाउने छन् ।
साझाजब मार्फत् विजनेस टु विजनेस सम्पर्क गर्न पनि सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ । हामीलाई लाग्छ, यसबाट दर्ता भएका संस्थाहरुले कर्मचारी पाउनु मात्रै नभई व्यवसाय पनि विज्ञापन हुनेछ ।
खासगरी जागिर खोज्नेका लागि कसरी सेवा दिनुहुन्छ ? अहिले युवापुस्ताको सरोकारको विषय छ यो ।
जागिर खोज्नेका लागि हामी संस्थाहरुले पोस्ट गरेका जबहरुलाई आफ्नो इच्छाअनुसार छनौट गरी जागिरको लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । आफ्नो सम्पूर्ण विवरण अपलोड गरी उत्कृष्ट बायो डाटा पाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक विवरण, रोजगारी तथा तालिमको विवरण आदि उल्लेख गर्ने सुविधा साझाजबमा छ ।
यो पोर्टलमा जबहरु सुरक्षित गरेर राख्न सकिन्छ । विभिन्न तालिमहरुको सूचना पाउन सकिन्छ । जागिरसम्बन्धि समाचारहरु पढ्न र बुझ्न सकिन्छ । उत्कृष्ट कम्पनिहरुको प्रोफाईल हेरी आफुलाई मन पर्ने कम्पनीहरुलाई फलो गरेर राख्न सकिन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरुबाट जागिरको अफर आएमा इमेलमार्फत् सूचित पनि गर्छौं ।
आफ्नो व्यवसाय दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ ?
व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि हाम्रो जब पोर्टलमा गएर इम्प्लोयर जोनमा जानुपर्छ । त्यहाँ ४ वटा प्याकेजहरु उल्लेख गरिएको छ । संस्थाहले उक्त प्याकेजबारे त्यहीँ बुझ्न सक्नुहुनेछ र आफुलाई राम्रो लाग्ने प्याकेज छनौट गरी दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ । साथै, दर्तापश्चात् आइडी र पासवर्ड प्रयोग गरी लग इन गरेर आफ्नो कम्पनीको प्रोफाइल अपडेट गर्न सकिन्छ र साथसाथै, त्यहाँ आफ्नो जबहरुबारे जानकारी पोस्ट गर्न पनि सकिन्छ ।
जागिर खोज्नेले कसरी दर्ता गर्न सक्छन् ?
जागिर खोज्नेहरुको लागि पनि त्यही प्रक्रिया छ । अनलाइनमा गएर रजिस्टरमा क्लिक गरी सिधै लग इन विथ फेसबुक गरेर पनि दर्ता गर्न सकिन्छ । दर्तापश्चात् आफ्नो सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आफुलाई राम्रो लाग्ने रोजगारी खोजी आवेदन दिन सकिन्छ ।
प्रयोगकर्ताहरुले पाउने अन्य सुविधाहरु के के छन् ?
यसमा साथीहरु बनाउन सकिन्छ । केही समयपश्चात कुराकानी गर्ने सुविधा पनि थप्दैछौं । हामीले बढ्दो डिजिटल बजारलाई मध्यनजर गर्दै सबै सेवाहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीसमक्ष सरल र छिटो तरिकाले पुगोस् र सबैले राम्रो सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ साझाजब सुरु गरेका छौँ । यसमा हामीले जबसम्बन्धि जानकारी सँगसँगै अनलाइन इम्प्लोयर डिरेक्टरी भनेर छुट्टै फिचर पनि राखेका छौं । त्यहाँ नेपालभरीका कम्पनिहरु धमाधम दर्ता भइरहेका छन्, जसमा धेरै कर्मचारीहरुको माग भइरहेको हुन्छ । यसबाट कम्पनिहरुको डिजिटल माध्यमबाट विज्ञापन हुनुका साथसाथै जागिर सम्वन्धि सूचना प्रवाह पनि गर्न पाईरहेका छन् । यसमा सरकारी तथा प्राइभेट कम्पनिहरुको बोलपत्र आह्वानजस्ता सूचनाहरु पनि प्रकाशित गरिन्छ । जसले गर्दा कुनै पनि कम्पनि हामीसँग जोडिइसकेपछि सबैकुराको जानकारी पाउन सक्नेछन् ।